Alassane Plea Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Arthur Masuaku Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Leon Bailey Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Home Ihe Mere Ezighi Anye Ọmụmụ Biography
Maka ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ, ịgụ banyere Biography nke ndị egwuregwu bọọlụ na-enwekarị mmụọ, na-akpali, ma na-enye agbamume. Nke a kpatara na anyi Football Untold Biography eziokwu dị adị !!
Bọọlụ dị ka anyị maara na ọ nwere ike ọ gaghị abanye na mbibi. Ọ bụ ezie na otu esi egwu egwuregwu a ka malitere n'ọtụtụ afọ, akụkọ ndị na-adọrọ adọrọ nke ọ na-anaghị akwụsị ịmalite ga-amalite na ncheta bọl aforiụado nke ọgbọ niile.
Akụkọ ndị a na-akọkarị banyere ndị na-egwu egwu, ndị na-ahụ maka egwuregwu na ndị na-egwu egwuregwu ahụ na-adọrọ adọrọ, na-emetụ aka, na-eche echiche ma na-enweghị atụ ọ bụla dị mma nke ndị na-agụ akwụkwọ, ndị na-ege ntị na ndị na-ekiri nwere ike ịkọwapụta mmetụta ọjọọ nke akụkọ ndị dị otú ahụ na-etinye n'uche ha.
Lifebogger na-ewetara akụkọ akụkọ na-atọ ụtọ banyere ndị egwuregwu football, ndị njikwa na oke. Ebe E Si Nweta Foto: LB.
Otu ihe dị mkpa nke na-eme ka akụkọ ndị ahụ bụrụ eziokwu bụ na ha anaghị amachapụ anya nke usoro ntanetị dijitalụ Ndụ ndụ nke gbakwunyere na akwụkwọ ọgụgụ na nka mara mma nke ede bọọlụ gbadoro akụkọ ndụ.
At Lifebogger, anyị na-anya isi onwe anyị dị ka ndị ọkachamara dijitalụ nke eziokwu na egwu akụkọ ụwa nke bụ akụkụ dị mkpa nke akụkọ ndụ anyị na-atọ ụtọ anyị na-ewetara ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka football na ndị na-ahụ maka ụwa niile.
Lifebogger bụ otu ebe ndabere dijitalụ akụkọ akụkọ football dị. Ebe E Si Nweta Foto: LB.
Na nkenke, isiokwu a bu inye ndị na-ege anyị ntị echiche zuru ezu banyere ihe anyị na-eme site n'ikwu akụkọ banyere ndị na-agba ụkwụ, ndị njikwa na ndị isi n'okpuru isi nke nwere ọgụgụ dị mma.
Ihe kpatara Akụkọ nwata - Ndị na-ahụ maka bọọlụ bọọlụ bụ ndị anaghị agba bọọlụ ọkachamara
Egwuregwu bọọlụ akwụsịghị mgbe ewepụtara wezuga nkwenye na echiche ndị ama ama. Otu n'ime echiche ndị dị otú ahụ na-egosi na ndị na-egwutụbeghị bọọlụ ọkachamara enweghị ike - ọ ka njọ - bụrụ ndị njikwa bọọlụ ma ọ bụ - nke kacha mma - ịga nke ọma na njikwa njikwa.
Dịka nkwenye ndị a kpọtụrụ aha na mbụ nọ na-aghọ eziokwu nke sayensị. Maurizio Sarri si na blues pụta wee bido ọrụ nkuzi ya na 1990 site na nke obere League Club AC Sansovino mgbe Andre Villas-Boas malitere dị ka onye inyeaka nchịkwa na Porto na njedebe 1990.
Andre Villas-Boas na Maurizio Sarri agbaghị bọl na ọkwa ọkachamara tupu ha amalite ọzụzụ. Ebe E Si Nweta Foto: WAGNH.
Ihe Mere Eziokwu Na-adịghị Agbanwe - Ndị egwuregwu bọọlụ bụ ndị nwere esemokwu n'etiti ndị njikwa
Esemokwu fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe agaghị ekwe omume na egwuregwu otu egwuregwu ọkachasị agba bọọlụ ebe egwuregwu ndị egwuregwu na-emetụta “ọkụ oge a” Ọ bụ ezie na a na-eche ihu mgbe ụfọdụ ma ọ bụ omume ike ike nke ndị egwuregwu gosipụtara megide ndị na-emegide ha dị ka akọ "ndị ọkachamara na-eduzi", a pụghị ikwu otu ihe ahụ mgbe ndị maara egwuregwu bọọlụ na-ewe ndị ọrụ ha ọkụ.
Ndị egwu bọọlụ Barcelona agaghị echezọ ogologo esemokwu dị n'etiti onye na-achịbu bọọlụ na mbụ Pep Guardiola na n'ihu Zlatan Ibrahimovich na nke ikpeazụ na-akọ na Guardiola gwara ya okwu ugboro abụọ na ọnwa 6. N'ihe mgbagwoju anya, ndị egwu Real Madrid kewara n'etiti ịkwado Iker Casillas or Jose Mourinho mgbe duo ahụ nwere ntụrụndụ n'ihe onye nchịkwa chọpụtara na ọ bụ mgbapụ nke onye mgbaru ọsọ Spain.
Zlatan Ibrahimovich na Iker Casillas enweela ogologo oge iwe dị ọkụ na ndị njikwa ha otu oge. Ebe E Si Nweta Foto: LB.
Na mgbakwunye, ọ bụghị ọtụtụ na-echeta nke ahụ David Beckham's oke ịkpa ike na Manchester United duuru onye nchịkwa mgbe ahụ Alex Furgeson ka igba bọọlụ na nkwanye ugwu. Akpụkpọ ụkwụ ahụ kụrụ Beckham kpọmkwem na ihu, ihe omume mere ka ọ nwee ike ibute Real Madrid na 2003.
Ihe Mere Eziokwu Na-adịghị Agbanwe - Ndị egwuregwu bọọlụ nwere ọtụtụ kaadị Red
Ndị na-ese okwu na ụdị a sitere na ndị na-agbachitere ndị siri ike na ndị na-eme egwuregwu etiti, yana ndị egwuregwu mara mma nke nwere oke iwe ma na-egosipụta oke iwe. N'ihi nke a, ha nwere ndekọ na-akụda mmụọ nke edepụtara na akwụkwọ ikike nke kaadị uhie.
Iji bido na ndị na - agbachitere ọgụ siri ike, Sergio Ramos n'elu eserese a ka ọ nwere nzaghachi ndị kachasị na akụkọ La Liga. Ọ bụ ezie na lara ezumike nká Steven Gerrad Otu nọ n'etiti ndị egwuregwu bọọlụ na-acha uhie uhie nke na-agbadata n'ọwara Anfield maka ịsa ahụ n'oge.
Steven Gerrard na Sergio Ramos nọ n'ọkwá dị elu na ndepụta nke ọtụtụ ndị na-egwupụ egwuregwu. Ebe E Si Nweta Foto: LB.
N’aga n’ihu anyị nwere Diego Costa nke egwuregwu ịkpa ike ya anaghị akwụsị inye ya nsogbu na ndị ọka ikpe ebe ọ na-aga. N’ezie, a na-ahụta ya ka ihe ọghọm na-eche ime mgbe ọ bụla ọ na-anwa ịnwete inweta n’aka ndị na-agbachitere ya.
Ihe Mere Eziokwu Na-adịghị Agbanwe - Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ bụ ndị Polyglot
Ewezuga itinye ego na ọzụzụ iji mara nka nke igwu egwu mara mma, ụfọdụ ndị egwuregwu agarala ọtụtụ kilomita iji mee ndị na-amasị ya obi ụtọ site n'ịmụ asụsụ obodo ndị otu ha kpọrọ. Mgbalị a emebeghị ka ndị ọrụ egwuregwu bọọlụ mara mma karịa n'etiti obodo ha kama na ha mere ka ha bụrụ ọkacha mmasị maka ọrụ nhazi mgbe ezumike nka.
Na-enweghị ọtụtụ ọ ,ụ, ndị egwuregwu mara ọtụtụ asụsụ gụnyere onye na-elekọta ihe Peter Cech onye na-asụ asụsụ ala nna Czech na-asụ Spanish, German, French na Bekee. N'aka nke ya, Henrikh Mkhitaryan na-asụ asụsụ Armenian nke ọma, Portuguese, French, Italian, Russian, Bekee na German.
Ikpeazụ ma ọ bụghị nke kachasị Romelu Lukaku onye gosipụtara na ya bụ njirimara zuru oke nke "hyperpolyglot ebe ọ na-asụ ihe na-erughị asụsụ 8. Ha gụnyere French, Lingala, Dutch, Belgium, Congo, Swahili, Spanish, English, Portuguese na German.
Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan na Peter Cech bụ polyglots na-adọrọ mmasị na football. Ebe E Si Nweta Foto: LB.
Ihe Mere Eziokwu Na-adịghị Agbanwe - Ndị na-egwu egwuregwu bọl na ndị njikwa ndị nwetara ogo agụmakwụkwọ dị elu
Somezọ ụfọdụ njiri mara nke football si kọwaa ya, ikere òkè na bọọlụ anaghị egbochi inweta ogo agụmakwụkwọ dị elu, echiche na-amịpụta mkpụrụ nke hụrụ ha ka ha na-aga idebanye aha maka kọleji ma gụchaa mmemme ha.
Onye ọkpụkpọ Italiantali Giorgio Chiellini n'elu ndepụta ahụ maka gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Turin na Master Degree na Business Administration. N'ihi na Juan Mata, inwe ogo abụọ - otu na ahịa na nke ọzọ na sayensị egwuregwu - ezughi oke. O nwere mmasi na imuta Psychology n'oge edere.
Na otu ndị njikwa, ị maara nke ahụ Frank Lampard nwere asambodo na Latin mgbe Vincent Kompany nwere akara ugo mmụta masters na nchịkwa azụmaahịa sitere na Manchesterlọ Akwụkwọ Azụmaahịa Manchester Manchester? N’egwuregwu ndị egwuregwu bọọlụ nwere ike ha enweghị aha ọgụgụ isi, mana ndị egwuregwu na ndị isi ihe ndị ae kwuru n’elu nyere aka nke ukwuu nyere aka gbanwee akụkọ ahụ.
Insbụrụ nwere onyinye. Site na LR Giorgio Chiellini, Vincent Kompany, Frank Lampard na Juan Mata, Ebe E Si Nweta Foto: LB.
Ihe Mere Eziokwu Na-adịghị Agbanwe - Ndị Kachasị Clubgba Ọsọ
English Premier League abụrụla ebe egwuregwu maka ijeri ndị ijeri ego na-azụta klọb ma na-efesa ego aka ekpe, aka nri na etiti. Banyere Europe bụ ihe nwere mmasị, onye nwe klọb kasị baa ọgaranya na n'oge edere bụ Sheikh Monsour, nwoke ahụ zụtara Man obodo.
Zute Sheikh Monsour- Onye nwe klọb kasị nwee ego na England. Ebe e si nweta ya Guardian & Mnd
N'ịchọ ịbụ onye nwe klọb, shei bụkwa onye Emirati eze onye bụ onye osote onye isi ala nke United Arab Emirates, onye minista na-elekọta ala na onye ezinaụlọ nke Abu Dhabi. Ọ bụ nwanne nwoke nke Onye isi ala UAE, Khalifa bin Zayed Al Nahyan.
Mgbe onye kasị baa ọgaranya na bọl bịara Joseph Joe Lewis onye billionaire na - achọghị ka ọ bụrụ onye nwe Spurs.
Joe Lewis (n'aka ekpe), onye nwe Spurs bụ otu n'ime ụmụ nwoke kasị baa ọgaranya na UK
Gị onwe gị anụla banyere Danial Levy, mana Joe Lewis bụ nwoke nọ n'azụ Spurs na onye họpụtara Levy dị ka onye isi oche ọgbakọ.
N’ikpeazụ bụ Roman Abramovich, onye a kacha mara amara na mpụga Russia dị ka onye nwe Chelsea FC Ọ bụ onye arụmụka na nwoke ahụ bụ onye gbanwere Chelsea site na Premier League n'akụkụ nnukwu onye Europe.
Maka ọtụtụ ndị egwu bọọlụ Chelsea na England na ụwa niile, Abramovich egosila na enwere ike izuta obi uto.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Ihe Mere Untold Biography Eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Denye aha na LIFBOGGER AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ!
Bọchị agbanwee: Ọktọba 16, 2020
Bọchị agbanwee: Ọktọba 13, 2020
Salomon Kalou Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
Right Copyright © 2016-2020